China RPET Ọsụsọ 87% polyamide 13% spandex Lycra Cotton Feeling Jacquard Custom 4 Way Stretch Printed Recycled Legging Fabric Manufacturer and Supplier | Wenchang
Ihe Nke ： KW18-1077
Ihe ： 13% Spandex 87% Polyamide
E ji mara ： Skin-Enyi na Enyi / mgbochi ndọlị / Elasticity / Wick / Ọsụsọ / gbatịa
Ejiri maka ： Egwuregwu / Yoga Wear
Nkebi NO KW18-1077
Ihe onwunwe 87% Polyamide 13% Spandex
Ibu ibu 280GSM
Njirimara Ngwa ngwa akọrọ / Wicking / Sweat / Stretch / Anti-UV
Mmepe akwa Yoga
Ejiri Yoga kpara akpa
Uwe a kpara akpa na-arụ ọrụ kwụsiri ike ma na-adịgide adịgide, na akwa ndị ahụ siri ike, na-agbasasị ala, na agaghị agagharị. Site na nhọrọ nke akụrụngwa, mgbanwe na nhazi usoro, na ike nke ịmecha, ọ na-etinye ahụ ike, mma na nkasi obi. Ejiri akwa yoga kpara.
Ftkpa Yoit kpara Yoga Fabric
Ejiri akwa yoga jiri akwa polyester yarn, yarn yarn, yarn owu, na yarn, na ihe ndị ọzọ, wee jiri ntanye larịị, ọnụọgụ dị larịị, eriri ndị a kpara akpa, akwa ụrọ abụọ, jacquard weaves, wdg. nwere ezigbo agbanwe, Extensibility, akwa dị nro, nkwụsi ike na ndọlị na-eguzogide, ụdị ntutu siri ike, dị mfe ịsacha na ngwa ngwa. Njirimara nke ngwaahịa a bụ: ịchọ aka dị nro, dị nro, ịdị mma dị mma, ma dabara na anụ ahụ mgbe ị na-eyi.
Enweghị nsogbu yoga akwa
Teknụzụ na-enweghị ntụpọ nwere ike ịgbanye usoro nhazi dị iche iche dị ka ịgbatị akụkụ dị iche iche nke mmega ahụ, ma jikọta ihe eji eme ihe nke akụkụ dị iche iche nke anụ ahụ iji gboo mkpa maka ịgbatị na mgbanwe nke akwa akwa.
Akụrụngwa eji eme ihe bụ spandex, lycra, owu, naịlọn, polyester, wdg. Nhazi usoro ahakarị yarn yarn, dịka akwa yarn float, flat yarn spun yarn, tuck spun yarn, jacquard spun yarn, wdg. bụ: mmetụta aka dị nro, ịdị nro, ịdị mma dị mma, wdg., Uwe na-adịkarị nso ma na-erutekikwa.
Omume mmepe nke akwa yoga
Uwe a kpara akpa nwere ike igosi nkasi obi dị elu na njikwa njikwa ọnọdụ yana usoro nhazi dị iche iche. Nwepu enweghị nke ọma ga-eme ka nkasi obi dịkwuo mma ma belata esemokwu. Tụlee itinye ajị anụ a rụgharịrị agbagharị ma ọ bụ ajị anụ merino na yarn ahụ iji wusie akwa ahụ ike oge oge.
A na-elebara anya nlebara anya na arụmọrụ chọrọ nke uwe. Ọdịdị nke ọgbọ ọhụrụ nke uwe yoga na-ejikọ teknụzụ na aesthetics, nke ọ bụghị naanị na-enye afọ ojuju ọrụ, kamakwa ọ dabara na ejiji na-ewu ewu.
Nke gara aga: Lycra Texture Weft Knitted 8% Spandex 92% Polyamide Shiny RPET Jacquard Wrinkled Seersucker Stretch Swimsuit Fabric
Osote: Eco-Friendly Grs Certified Factory Knitted Recycled Fabric Men Bird Eye Mesh Recycled Plastic Polyester Fabric for Sportswear
Jacquard Yoga Eyi akwa
Lycra Cotton Na-eche Fabkwà
Ighaghachi Legging Fabric